Oomatshini abathengisa nge-Smart baye baba yeyona ndima iphambili yexesha lokuthengisa. -Iindaba zeshishini-Hunan Zhonggu Science and Technology Co, Ltd.
Oomatshini bokuthengisa abenzekileyo baye baba yeyona ndima iphambili yexesha lokuthengisa elingenamntu.
kwizimvo:12 umbhali: Ixesha lokushicilela: 12 imvelaphi:
Ubukrelekrele bokuthengisa kunye neetekhnoloji ezingacwangciswanga zinciphisa iindleko zabasebenzi kunye nerente kunye nokunyusa ukusebenza ngokukuko, namhlanje siza kuthetha ngezinto ezintsha koomatshini abathengisayo.
Ioomatshini bokuthengisa abanobuqili zaye Phuculad kwaye ziphuhliseed ziinkampani ezininzi xa beqala ukuphakama kwaye kungaphelanga nonyaka omnye imisebenzi yabo igqityiwe kancinci kwaye iguqukileved kwiukuba umphathi weemveliso ngokubanzi. Oomatshini abathengisayo bahlulwe baba ziindidi ezininzi ezahlukeneyo njenge isiselo se-orenji, kuba ikofu kunye nokuba kuba i-noodles, umatshini wokuthengisa odibana nabantu'Iimfuno kufuneka zibekho jikelele kwaye zivuleke bunobangela Ngale ndlela iyahambelana neemveliso ezahlukeneyo kwaye iphumelele'Izithintelo kwiimveliso.
Ukuvulwa akuthethi kuphuhliswa kweeshelfu, kodwa Ye-intanethi ezivenkileni amajelo. Oomatshini abathengisayo ba ayithengisi ngaphandle kweintanethi kuphela kodwa ikwathengisa kwi-Intanethi njengesixhobo sokudibanisa umthengi, Uncedo lwe ukusondela kakhulu kwi abathengi kukho indawo engenamda yokuphuhlisa kwikamva njengoko sinokuthi oomatshini abathengisa ngabo kufutshane Iindawo zokuthengisa kumthengikwaye eli inokuba lelona thuba likhulu, njengomnyango wokungena koomatshini abathengisa baxabiseke kakhulu.
Ngaphambili: Umatshini wokuthengisa uye wagxila kuphuhliso kwintengiso yentengiso ekrelekrele kunye neemodeli zeshishini ezahlukeneyo.
Okulandelayo: Ngaba oomatshini abathengisayo baya kuba ngumkhwa kwixesha elizayo?